Tanora tanora antonony? | Martech Zone
Tanora tanora antonony?
Alatsinainy, Aogositra 7, 2006 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
Seth fanamarihana anio ao amin'ny lahatsoratra iray avy ao amin'ny LA Times. Lahatsoratra feno pitsopitsony amin'ny ankizy 12 ka hatramin'ny 24 taona izy io.
Ny mahavariana dia miresaka amin'ny ankizy tsy any Hollywood ilay lahatsoratra… fa ny zanako lahy (17) dia eto Indiana izao! Ho hitanao fa ny kilometatra an'arivony dia mahita fahasamihafana kely eo amin'izy roa. Amin'ny andro iray, dia izao no hitanao ataon'ny zanako lahy:
Fanavaozana ny MySpace
Fanavaozana ny Blog
Fandraisana an-tsoratra ny mozikany manokana (Zahao BillKarr.com)
Manoratra mozika miaraka amin'ny namany
Mampifangaro mozika mampiasa Acid Music Studio
Mandeha amin'ny seho (kaonseritra kely)
Manome hevitra momba ny MySpaces hafa
Miresaka amin'ny telefaona
Mianatra mitondra fiara
Vondron'ny tanora ao am-piangonana
Mamaky (ataoko mamaky izy… fa manomboka mihaodihaody kosa izy)
Miaraka amin'ny namana mpivady i Bill amin'izao fotoana izao amin'ny sarimihetsika. Tsy dia fahita firy ny fandefasana sarimihetsika… nahena ny teti-bolany. Azonao atao ny mahatsikaritra zavatra iray tsy hita ao amin'ny lisitra… TV. Mila mangataka aminy ara-dalàna aho mba ho avy hijery fandaharana amin'ny fahitalavitra miaraka amiko! Ny zanako lahy dia marani-tsaina, tsara fo ary salama. Taloha dia nilalao baolina kitra, baskety, baseball, skateboarding, rollerblading, sns, sns sns izy, indray mandeha, nivadika ny XBox -ny ary nilalao kilalao vitsivitsy niaraka tamin'ny namany.
Raha tsy misy faneriterena avy amiko, ny zanako lahy dia tsara fomba ary olona tena mifanerasera. Mitovy daholo ny namany rehetra. Izy ireo dia manana tsiro hafakely amin'ny mozika, fitafiana, volo, kiraro sns… izay tsy be mpampiasa. Raha ny marina, ny fahavalo dia ny fahavalo. Izay mamerina ahy amin'ny hevitr'i Seth:
Raha sahirana ianao mivarotra toa ny nahasarihako ny sainao dia efa nanao hadisoana lehibe ianao.
Ny zanako lahy dia mety ho nofy ratsy an'ny mpivarotra. Ny ankamaroan'ny 'tsiroany' dia avy amin'ny fitondran-tenany ara-tsosialy, ary tsy misy izany amin'ny alàlan'ny dokambarotra mahazatra. Tena zavatra eritreretina izany! Heveriko fa tsy tofoka ny zanako lahy. Raha ny tena izy dia heveriko fa ny mifanohitra amin'izay ihany. Manandrana manao zavatra mamokatra isa-minitra isan'andro tokoa izy. Miaina ny fiainana feno izy ary tsy te handany minitra adiny iray akory.
Ary… tsy toy ny ankamaroan'ny ray manan-janaka lahy tanora, tsy mahalasa adala ahy izy. Ho hitanao izahay mihomehy sy mikorontana isaky ny alina. Tsy hanome azy anarana antonony mihitsy aho - tovolahy mahafinaritra izy ary matoky aho fa hahatratra zavatra betsaka amin'ny fiainana.
PS: Mbola mila miantso mafy aho mba hamoaka azy ny alika, fa hiatrika an'izany aho isan'andro raha ampitahaina amin'ny zavatra tsy maintsy raisin-draiko!
PPS: Manan-janakavavy 12 taona aho izay mitovy fientanentanana ihany koa, saingy tazomiko hiala amin'ny Internet izy.
Rehefa mandeha miasa ny Psychopaths